Fiparitahana valanaretina :: Niampy dimy ireo olona voan' ny “coronavirus” • AoRaha
Nitombo indray ny tarehimarika. Niampy dimy ireo olona mitondra ny tsimok’ aretina “Covid-19” eto Madagasikara, araka ny tatitra nataon’ny Filohan’ny Repo – blika, Rajoelina Andry, omaly hariva, tao amin’ny haino aman-jerim-pirenena. Tafa – katra fito ambin’ny folo, araka izany, ny fitambaran’ireo olona voan’ny aretina “corona virus” eto amintsika taorian’ ny fitiliana nataon’ny “Institut Pasteur”, omaly.
Olona niray fiaramanidina tamin’ireo olona sasany efa mitondra an’ity tsimok’aretina ity avy any Frantsa izy dimy hafa ireo. Efa manaraka fitsaboana eny amin’ny hopitaly manara-penitra avokoa ireto olona dimy vaovao mitondra ny tsimok’aretina “Covid-19” ireto. Namba – ran’ny Filohan’ny Repoblika fa tsy mbola misy na iray aza amin’ireo marary fito ambin’ ny folo ireo no namoy ny ainy. Efa mandeha araka ny tokony ho izy ny fitsaboana azy ireo.
Nampahafantarin’ny Filohan’ny Repoblika fa: “efa manana an’ireo fanafody nitsaboana an’ireo olona tany Shina sy fanefitra avy any amin’ireo firenen-kafa ny eto amintsika”. “Homena ireo raokandro malagasy sy ireo sakafo manamafy ny hery fiarovana koa ireo marary. Hanomboka hikaroka an’ireo fanafody hanasitrana an’io aretina io koa ireo mpitsabo mpikaroka Malagasy”, hoy ihany ny Filoha.
Nanome toky izy fa efa vonona amin’ny fiatrehana amin’ny ady amin’ity valana – re tina ity i Madagasikara ankehitriny ”tonga eto amin’ ity herinandro ity ireo fitaovana fanaovana fitiliana izay hahazoana valiny ao anatin’ ny roapolo minitra. Ho avy koa ireo tampim-bava an’ aliny hozaraina amin’ireo olona mifanerasera amin’ny fitsaboana ny aretina”, araka ny fanampim-panazavany.
Fampidiram-bolam-panjakana :: Miato vonjimaika ny fandoavana hetra alaina amin’ny vola miditra